Itoobiya: Fadeexad Ka Taagan Imtixaanka Jaamacadda Lagu Gelayo - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya: Fadeexad Ka Taagan Imtixaanka Jaamacadda Lagu Gelayo
Itoobiya ayaa guud ahaan dalka ka bakhtiisay khadka internetka toddobaadkii ugu horreeyey ee bishii June ee sannadkan 2019 si ay uga hor tagto in loo adeegsado qishka imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad, kaas oo ay ardaydu ugu gudbaysay Jaamacadaha.
Bakhtiinta Internetku waxay dalka gelisay go’doon iyo kala xidhnaan, laakiin haddana markii ay soo baxday natiijadii imtixaanaadku, waxa soo ifbaxday in khaladaad waaweyn ay dhaceen muddadii imtixaanku socday, taas oo sababtay in toddobaadkan ay masuuliyiinta wasaaradda waxbarashadu laasho natiijooyinka maadooyin muhiim ah.
Wasaaradda Waxbarashada ee Itoobiya ayaa Arbacadii shaacisay in ay aqbali doonto kaliya afar maaddo oo Imtixaankii Tacliinta sare ee dhawaanta ay natoojadoodu soo baxday, kuwaas oo ah maaddooyinkii imtixaankooda la galay labadii maalmood ee ugu horreeyey ee bishii June.
Masuuliyiinta waxbarashada Itoobiya oo ay wehelinayeen xubno ka socda hay’adda NEAEA ee qiimaynta imtixaannada ayaa waxay ka sheegeen inay fadeexado waaweyn dhaceen intii uu imtixaanku socday, waxaanay si gaar ah u baabi’iyeen natiijooyinka imtixaannadii la qabtay labadii maalmood ee u dambeeyey.
Ardayda gelaysa jaamacadda ayaa kaliya waxa lagu qiimayn doonaa shanta maaddo ee kala ah: English, Aptitude, Xisaab, Juquraafi iyo Physics.
Warkan oo kusoo beegmay xilli ay wasaaraddu shaacisay inay isbeddel ku samaynayso siyaasaddeedii waxbarashada, isla markaana ay dooranayso inay kusoo biiriso Social Science ama Natural Science, kuwaas oo ardayda u qaadan doonaan diyaarinta Jaamacadda fasalladda 11aad iyo 12aad.